Shell Hard Shell misy vokany be
Miaraka amin'ny liner EPS
Fandefasana rivotra be atitany
Voamarina ny bisikileta sy skate
Azo alaina amin'ny skate, scooter ary fiarovan-doha.
Karazana vokatra Fiarovan-doha E-bisikileta
Laharana maodely E-bisikileta fiarovan-doha V01
Manitatra safidy Ampinga azo zahana amin'ny mangarahara
Rafitra mety Nylon ST801 / POM
Indraindray tsy azonao atao ny mandresy ny sandan'ny kilasika, ny fiarovan-doha V01 dia tena fiarovan-doha skate miaraka amina akorandriaka ABS ambany noho ny faharetana sy ny valiny EPS mora volo izay manampy anao hitroka angovo misy akony, ny valizy feno padding dia mamela anao handahatra ny mety amin'ny fahatsapana hafahafa nefa mahazo aina ihany koa. Tsy misy fanelingelenana, tsy misy frills, manarona mahitsy izay tsy hamela anao hidina. Ny fantsom-panafody natao ho an'ny rivotra dia mamela anao hanitsy ny mety ho fehin-kibo amin'ny ririnina na beanie manify. Ny fantsona lalina dia mampihetsika ny rivotra amin'ny alàlan'ny fiarovan-doha mba hitazomana ny zava-baovao sy milamina rehefa mandeha ianao. Azonao atao ny mitaingina na aiza na aiza amin'ny fampiononana sy ny fomba. Izy io dia voamarina ho an'ny bisikileta na skate. Na eo amin'ny valan-javaboary ianao, mandrovitra, mitsambikina maloto na mitsangatsangana any am-pianarana fotsiny, dia natao mba hifanaraka amin'ny fombanao.
Ny akorany ABS akorandriaka be fiakarana manome fiarovana tanteraka, miaraka amin'ny fanandramana maro sy ny fandalinana ny angon-drakitra farany hitanay fa ny hatevin'ny akorandriaka tsara indrindra mba tsy handalo ny fanadinana ao an-trano sy ny fanamarinana ny ampahatelony ihany koa fa ny lanjany maivana indrindra koa, nanao fikarohana izahay fanandramana fa nandalo fidirana avy amin'ny haavon'ny 1 metatra ny akorany!
Mampifangaro ny lineran'ny EPS misy vokany izahay ary mampiasa teknolojia bobongolo, izay mampihena ny lanjan'ny fiarovan-doha ary manatsara ny faharetana, dia nanamboatra fantsona anatiny sy ivelany an'ny EPS izahay mba hahatsapa ho milay kokoa amin'ny maivana.
Ny fiarovan-doha miaraka amin'ny ampinga mangarahara misy vokany be dia be mba hahazoana antoka fa azo antoka ny filatsaky ny orana sy ny vovoka izay azonao atao ny mifantoka amin'ny mitaingina, ho toy ny ampahany amin'ny zotram-pitaterana, ny kinova ampinga dia azo ampiasaina amin'ny fiara sy ny scooter, ny fiarovan-doha tsy dia atahoranao velively ny amin'ny sakana miaraka amin'ny ampinga ary mitazona anao mahazo aina.
Miaraka amin'ny fonon-doha lehibe amin'ny fiarovan-doha, dia mampiasa lamba malaso haingana izahay mba hahazoana antoka fa tsy ny fampidirana aina fotsiny fa ny fihetseham-po mangatsiaka ihany koa, ny lamba firakotra ambony ambony sy eo anoloana dia manome endrika milay sy lavorary amin'ny lohanao.
Teo aloha: Helmetaly bisikileta an-tendrombohitra VM202
Manaraka: E Scooter fiarovan-doha V10S
Mividy bisikileta amin'ny bisikileta
Helmet amin'ny bisikileta fanatanjahan-tena